Tụkwasị Obi, Mgbasa Ozi na Pzụlite Nkwalite | Martech Zone
Fraịde, Machị 28, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'afọ gara aga mgbe m gara Social Media Ahịa Worldwa, M nwere ndị kasị ịrịba mkparịta ụka na Cheryl Viirand, nchoputa nke Nnwere onwe.
Cheryl akụkọ bụ ihe ọ bụla dị mkpirikpi nke ịtụnanya - ọ bụ onye ọka iwu na-arụ ọrụ na ụfọdụ nke technology ụlọ ọrụ kasị ukwuu mbụ ghọọ nri ọkwọrọikọ. Mgbanwe ahụ mere mgbe Cheryl tara onwe ya na nwa ya ụfọdụ na-arịa ọrịa na-amaghị ihe kpatara ya. Na arụmụka bụ nri nri na uche nke na-emebi ndụ ya na ndụ nwa ya.
N'oge ihe omume ahụ, enwere m nnukwu nrụgide - agbasawanye azụmahịa m n'ụzọ dị egwu site na atụmanya ụfọdụ m na-atụghị anya ya, nna m na-anwụ na-arịa ọrịa leukemia, ma na-agbasi mbọ ike na ibu m nke na-enweghị nchịkwa. N'afọ sochirinụ, enwekwuru m ibu, enwere m okpukpu abụọ 2 n'ọkpụkpụ azụ nke na-egbochi ike m ịga ije ma ọ bụ na-emega ahụ, na enwere m nhụsianya.
Ọnwa abụọ gara aga, nke gbanwere mgbe enyi, Ben McCann, nwere 'nro' ntinye aka na m. M sonyeere ụlọ ọrụ ọnwụ ya - nke gbanwere nri m - na-elekwasị anya na protein ndị na-arịwanye elu, wepụ shuga, fructose, carbohydrates na ihe ọ bụla ọzọ riri m ahụ na nri m. Kemgbe ịmalite, akwụsịrị m karịa 50 pound na agagharị m ka mma. The ije ebe a na ogbako kemgbe enweghi mgbu n'ihi na ọtụtụ akụkụ - ezie na m ka na-ebu ihe 200 pound kwa ọtụtụ.
N’abalị ụnyaahụ, mụ na Cheryl nwere mkparịta ụka ọzọ dị ịtụnanya. Obi dị ya ụtọ na mgbanwe m na-eme ma kesaa otu Nnwere onwe na-aga n'ihu na ndụ. Ọ bụ obodo nke ndị nwere mmụọ na-ekerịta akụkọ, ndụmọdụ, ntụziaka na ihe omume banyere mmetụta uche, nri nri, na nri. Ya na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ ugbu a.
Mkparịtaụka anyị mere ka anyị tụlee etu ụlọ ọrụ ndị a si chọọ iwu obodo. Enwere nnukwu nsogbu na nke a. Rationslọ ọrụ na-echegbu onwe ha banyere isiokwu Cheryl na-atụle, mana ha agaghị adaba na agụụ Cheryl. Ha enwetụbeghị ụdị ahụhụ Cheryl nwere. N’ikpeazụ - ebum n’uche ha bụ ire ebe Cheryl nọ ịkekọrịta. Mgbe ụlọ ọrụ nwere obodo, ekwetaghị m na ọ ga - enwe ike imeri nsogbu ntụkwasị obi n'ihi na ndị mmadụ ghọtara na enwere ihe na - akpali ndị obodo ịre. N'agbanyeghị ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ, Cheryl ga- mgbe niile be tụkwasịrị obi Ọzọ.
E nwere ihe ọzọ na-eme nke ọma kwa ụbọchị na-elekọta mmadụ media… na nke ahụ ụlọ ọrụ nkwado. Mgbe ụlọ ọrụ nwe obodo, a na-ajụkarị mkpali ya. Mana mgbe ụlọ ọrụ na-akwado obodo, a na-enwe ekele maka ya ma na-akwụghachi ya ụgwọ. Nkwado na-ekwu n'ụzọ bụ isi, "Anyị na-amata ikike gị, oke agụụ, mkpali na nnwere onwe na-arụ ọrụ gburugburu isiokwu a - ọ ga-amasị anyị inyere gị aka itolite obodo ahụ n'ihi na anyị na-echebara ya echiche.
Cheryl chọrọ ịmalite obodo ma tinye ya ego iji kwado mmepe ya. Ana m agba Cheryl ume ka ọ mee ya na nke ọzọ - mee ka agụụ ya na mmasị nke obodo sie ike site n'enyemaka nke ndị na-akwado ya - wee lelee ka ọ na-eto! Uru nke nyiwe Cheryl na obodo abụghị ego a na-akwụ site na mgbasa ozi pịa-site na mgbasa ozi… ọ na-akwụ ụgwọ maka mmasi nke Cheryl nwere na eziokwu ahụ enweghị ike ịda. Isi okwu a abanyela na ndụ Cheryl ugbu a na ọ ga - abụ onye nwere ikike n'okwu ndị a ma nwee mmasị na ịkọkọrịta ahụmịhe na ahụmịhe ya.
IMO, a onye njikwa obodo on a ika si obodo na saịtị ahụ agaghị abịa nso ịga nke ọma na tụnyere. Obodo na-elekwasị anya na nsogbu etiti, nkwenkwe, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ihe omume ntụrụndụ na talent - ọ bụghị gburugburu ụdị. Cheryl ga-aga nke ọma ebe akara ga-ada n'ihi na - n'ikpeazụ - mkpali dị iche. Ndị ahịa nwere ike ịnụ isi ihe na-akpali otu kilomita. Lọ ọrụ ọ bụla nwere nkà ga-ama Cheryl, site na Nnwere onwe, bụ ego dị egwu - yana ihe egwu dị na ịkwado ụdị obodo a n'isi uto ya ga-abụ onye nkwado kwesịrị ịzụrụ.
IHE: obim elewo Social Media Marketing World si na tebụl gị site na iji njem na-eji njikọ njikọ anyị!
Tags: cheryl viirandobodoobodo nrinwere ike ịhapụ
Douglas, ezutere m Cherry na # smmw13 ma enweghị obi abụọ ọ bụla na ọ ga-agbanwe ka ndị mmadụ si ebi nri nwere ike ịgabiga iri nri: site n'ọkwá ikike, ọ bụghị nkwụsị. Ya #customeater ije na-akpali akpali, dị ka ị maara nke ọma (na-aja gị mma maka mmeri nke gị ugbu a)! Ekwenyere m na ọnọdụ gị gbasara ụdị ndị a na-ejighị ntụkwasị obi karịa ndị dị ka Cherry. Nke a bụ eziokwu karịsịa na ụlọ ọrụ m, nlekọta ahụike. Mana ụdị ndị obodo a na-ewu abụghị naanị maka ire, ọ nweghịkwa mgbe ọ bụla na-enyo enyo maka ihe kpatara ha ga-eji chọọ ka ha na ndị na-eso ụzọ nwee ezigbo mmekọrịta. Amaara m onwe m ọtụtụ ndị dọkịta na-ahapụ ọrụ onwe ha ma sonyere aha n'ihi na ha maara na ha nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ahụike obodo ahụ n'ụzọ ahụ. Ọ bụ ezie na akara nwere ike ọ gaghị abụ otu ụdị ikike a tụkwasịrị obi dị ka mkpụrụ obi na-enweghị ike dị ka Cherry Viirand, enwere ebe maka ha dị ka ndị na-akwado ha na ndị na-akwado ha, dịka ị na-atụ aro, ma ọ bụ ọbụlagodi ụzọ ịgbasawanye iru ha na blọọgụ ọbịa, RTs na + 1s. Mana ndị nwere mmụọ nwere ebe niile - na ụdị ndị nwere ọgụgụ isi na-etinye ha n'ihu na etiti. Ga-ekweta?
Akwa post Doug .. Daalụ maka ịkekọrịta ..
Nnọọ Doug, ị kwesịrị otuto ..
Goodnessdịmma m, Doug - a na-atọ m ụtọ, enweghị m ike ịkele gị maka okwu ọma gị. Wayzọ ị siworo mee ahụike gị dị egwu - na - ewere ihe ịma aka ma na - enweta bọọlụ izizi ahụ dị oke egwu, ọgụgụ isi. Ọ na-agbanwe ịgbanweghachi azụ n'aka dị elu site na nsogbu ahụike yiri ka "ọ bụ nke a na-apụghị igbochi" - na ị na-enwete mgbanwe ahụ ugbua!
Tolite obodo nke nwere onwe bụ njem pụrụ iche - site na mbido beta mbụ anyị, ndị na-ede blọgụ nri pụrụ iche na ụfọdụ ụdị ndị kachasị na ohere "n'efu" si na-awụli ụgwọ iji binye mgbasa ozi ha na mbọ m. Ọ bụụrụ m ihe mmụta pụrụ iche na mgbe ị na-eduga site n’ọchịchọ gị, ndị ọzọ agaghị esoro gị ma kwụrụ gị n’akụkụ. Daal, Daug, maka ịbụ otu n'ime ndị ahụ!
Doug..kwere na ị obodo ga-eme ka a pụrụ ịdabere na ụzọ na-emekọ ihe ahịa na-egosipụta anyị ọhụrụ echiche na-eme n'ọdịnihu ngwaahịa mmepe si.